Mariky ny Aztec sy ny tandindon'izy ireo amin'ny tombokavatsa | Ny fanaovana tatoazy
Marika Aztec hitafy ny tatoazyo
ny marika aztec Izy ireo dia iray amin'ireo endrika tsara azontsika anaovana tatoazy. Miverina amin'ny firaisana isika na ara-kolontsaina na ara-pinoana izay mandrafitra an'io sivilizasiôna io. Na dia eo aza ny fandehan'ny fotoana, ny tsirairay amin'ireo marika famantarana nanome azy dikany dia mbola misy ifandraisany.
Raha tianao ny mariky ny Aztec ary mieritreritra ny hitondra ny iray amin'izy ireo ianao, anio dia hanome anarana azy ireo izahay ary hamariparitra bebe kokoa azy ireo. Amin'izany fomba izany dia ho fantatrao izy rehetra ary ho fantatrao ihany koa tandindona inona ireo volavola ireo. Aza adino izay rehetra ananantsika ho anao anio!
1 Fiandohan'ny tatoazy misy marika Aztec
2 Ny tatoazy masoandro sy ny tandindony
3 Ny voromahery mahery sy hery Aztec
4 Ny kalandrie Aztec lehibe amin'ny endrika tatoazy
5 Ilay menarana Aztec na Quetzalcoatl
6 Tezcatlipoca, andriamanitra mpiady
Fiandohan'ny tatoazy misy marika Aztec
Handeha any Mexico izahay, satria any no hamonjeko ny kolontsaina sy ity sivilizasiôna ity. Ity karazana tatoazy ity foana natao hanomezam-boninahitra an'ireo andriamanitra izy ireo. Tena mahazatra azy ireo ny manao izany rehefa manao karazana fombafomba. Na dia ireo andriamanitra aza no antony lehibe indrindra dia tsy maintsy lazaina ihany koa fa indraindray, ny tombokavatsa dia nampiasaina hanavahana ny olona amin'ny foko iray hafa. Toy izany koa, izy ireo dia loharanom-pahalalana tsara ho an'ny olona samy hafa sokajy sosialy, mpiady sns. Tamin'ity kolotsaina ity dia noheverina ho izany ny faritra be mpampiasa indrindra amin'ny fanaovana tombokavatsa dia ny tratrany, ny kibony na ny sandrin-tanana sy ny hatotanany.
Ny tatoazy masoandro sy ny tandindony
Ny iray amin'ireo marika Aztec malaza indrindra dia ny tatoazy masoandro. Ho fanomezam-boninahitra an'i Andriamanitry ny masoandro fa izy dia fantatra amin'ny hoe Huitzilopochtli. Nihevitra azy ho mpiambina niaro ny lanitra ny rehetra. Misy angano manodidina azy. Voalaza fa na dia tao an-kibon-dreniny aza izy dia afaka namantatra ny drafitra iray ananan'ny rahavaviny sy ny zokiny lahy. Te hamono ny reniny daholo izy ireo. Ka rehefa teraka ny masoandro Andriamanitra dia izy no namono ny rahavavavavaviny sy namadika azy ho volana, raha ny rahalahiny kosa no lasa kintana. Raha te hanome tatoazy toy io dikany lehibe io ianao dia tsy maintsy ho ilay fisiana any ankoatry ny fiainana.
Ny voromahery mahery sy hery Aztec
Ny iray amin'ireo marika Aztec dia ny voromahery. Iray amin'ireo endriny hitanao tamin'ny mpiady io. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria maneho ny tanjaka sy ny herim-po. Na dia toy ny karazana tatoazy rehetra aza isika dia misy ohatra maromaro, misy ny tena mampiavaka azy. Voromahery izay manatrika miankandrefana ny lohany ary somary manjombona ny vavany. Izy io dia iray amin'ireo volavola avy amin'ny kolotsaina malaza ary izay mitafy azy dia hanome anao fiarovana ary koa herim-po ilaina.
Ny kalandrie Aztec lehibe amin'ny endrika tatoazy
Ilay antsoina hoe Tetiandro Aztec, Izy io dia iray amin'ireo marika lehibe indrindra ho an'ny tatoazy miaraka amin'ity fomba ity. Izy io dia endrika izay manana marika maromaro. Anisan'ireo rehetra ireo ianao dia afaka mahita fahalalana astronomia sy angano miafina. Ny kalandrie dia vato lehibe niafina nandritra ny 200 taona mahery. Voalaza fa manana vato manodidina ny 24 taonina sy mihoatra ny telo metatra io vato io.
Angamba izany no antony in olan'ny tatoazy, matetika dia manana habe be. Noho izany, raha vonona ny hanao famolavolana toy izao ianao dia tsara indrindra amin'ny faritra toy ny lamosina na ny tratra mba ahafahany mamirapiratra amin'ny hakantony rehetra. Eo afovoan'ny tatoazy dia ny endrik'Andriamanitry ny Masoandro. Izy no hanondro ny fiainana sy ny fahafatesana. Amin'ny lafiny zorony dia misy anarana izay misy masoandro efatra hafa. Ireo singa hafa izay ao anatiny dia tonga hamaritana ireo andro izay ampifandraisina amin'ny antsipirian'ny masoandro, ary koa ny bibilava.
Ilay menarana Aztec na Quetzalcoatl
Mazava ho azy fa eo koa ireo biby amin'ireo tatoazy ireo. Amin'ity tranga ity, sisa tavela amin'ny bibilava isika na antsoina koa Quetzalcóatl. Azo antoka fa nahita izany tamin'ny endrika maro ianao! Io dia iray amin'ireo marika lehibe ananan'ny kolontsaina toa izao. Izy io dia tandindon'ny fahavokarana, fa izy koa no nanome fahalalana, miaraka amin'ny fianarana. Ny menarana dia iray amin'ireo andriamanitra mahery, izay misy ifandraisany amin'ny toetrandro ihany koa.
Tezcatlipoca, andriamanitra mpiady
Tsy isalasalana ny Andriamanitra mpiady io koa dia iray amin'ireo volavola lehibe. Amin'ity tranga ity dia voalaza fa tsy hita izy io, na dia mety miseho alina maromaro aza. Izy io dia tandindon'ny fifanoherana rehetra ary koa ny trangan-javatra meteorolojika. Fantatrao ve ireo tandindona rehetra ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy ara-pinoana » Marika Aztec hitafy ny tatoazyo
Candelaria Tinelli dia manao tombokavatsa amin'ny tànany havia vaovao
Ny tatoazy vaovao Arturo Vidal dia handrisika anao: "Aza milavo lefona"